I-Snapdragon 865 iya kuxhasa i-HDR10 + esemgangathweni esemgangathweni evela kwiQualcomm | I-Androidsis
UAron Rivas | | Izaziso, Ezinye izixhobo
Umlawuli oPhezulu weQualcomm kuLawulo lweMveliso uJudd Heape ukhuphe udliwanondlebe olutsha ku Android Authority apho achaze khona ukuphunyezwa okukhulu okuzayo kwee-chipsets ze-Snapdragon ezizayo.
Ngokuka-Judd, i-Snapdragon 865 ezayo, eya kuba yi-SoC esekwe kwi-giant elandelayo-grade grade, izakuxhasa Umgangatho weQualcomm HDR10 +. Iinkcukacha ezithe kratya apha ngezantsi.
Kwimeko apho ungazi, umgangatho we-HDR10 waveliswa ekuqaleni yi-Samsung kunye neAmazon ngo-2017. Emva koko, Isamsung iphuhlise i-HDR10 + yokuvelisa ngcono umfanekiso.
Ngoku I-Qualcomm isebenza kwinguqu yayo ye-HDR10 +, Eziza kuqala i-chipset yayo elandelayo. UJudd Heape ubhekisele kwiprosesa entsha ngokuyibiza ngokuba yi-Snapdragon 865, kodwa akakhange aqinisekise ukuba ligama lokugqibela le-chipset. Ngumlandeli wendalo we Snapdragon 855, kodwa igama layo lisenokutshintsha.
Gcina ukhumbule ukuba i-Snapdragon 855 sele ixhasa i-HDR10 +Kodwa isuka kwi-Samsung kwaye ayiveli kubuchwephesha iQualcomm iyaphuhliswa ngoku. Umgangatho omtsha ovela kwisigebenga saseSan Diego kunokwenzeka ukuba ukhuphisane ne-Samsung's.
Kwelinye icala, u-Judd Heape ukwathethile ngokuxhasa izigqibo zekhamera yee-chipset zakhe ezikhoyo ze-Snapdragon kudliwanondlebe olufanayo. (Apha inqaku elihambelanayo). Kutshanje iQualcomm ihlaziye iphepha elichaziweyo leetshipsi ezikhoyo zeSpapdragon ngokongeza ifayile ye Inkxaso yeekhamera ukuya kwii-megapixels ezili-192.
UJudd ucacisile ukuba oku kungena kwimakhishithi akuzange kongezwe ngaphambili kuba eyona ndlela isisombululo iphezulu ayixhasi i-30fps kunye ne-60fps, kunye ne-zero shutter lag kunye netekhnoloji yokunciphisa ingxolo yesakhelo (aka ZSL). Kodwa, njengoko abavelisi abahlukeneyo beqala ukuxhobisa izixhobo zabo ngeenzwa ngezigqibo eziphezulu, inkampani igqibe ekubeni yazise abasebenzisi, abavelisi kunye nabaphuhlisi malunga nenkxaso yeekhamera ezinezisombululo eziphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Snapdragon 865 iya kuxhasa i-Qualcomm entsha ye-HDR10 + esemgangathweni
I-Qualcomm iya kubonelela ngenkxaso ye-100 ukuya kuthi ga kwi-192 MP yeekhamera